Ny sary azo raisina dia mamorona sary feno hetsika nataon'i hot.kenobi | Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa halanao sy ho tianao hot.kenobi noho io fahaizany lehibe io dia tsy maintsy raisiny ireo tarehin-tsoratra tianao indrindra ary mijanona ao amin'ny fanangonana maro, ary asaivo mihetsika izy ireo na velona mihitsy aza.
Ary toy izany koa, mafana.kenobi dia Japoney mpaka sary iray izay nanana ny eritreritra lehibe haka ireo tarehimarika ireo an'ireo mpanangom-bokatra ary alao amin'ny fakantsarinao. Izany hoe, manoratra seho toa sary nalaina tamin'ny sary mihetsika na koa avy amin'ny iray amin'ireo andian-tantara izy.
Kenobi dia mitondra ireo maherifo ireo, ho Goku avy amin'ny Dragon Ball na Batman tenany, ary mametraka azy ireo amin'ny seho mahatsikaiky izay samy mitantara tantara kely na tafiditra ao anatin'ny tantara lehibe kokoa aza.
Azontsika jerena ny fomba Batman mamela ny tenany hametaka saka ao anaty lambany miaraka amin'ny fihetsika somary matotra, na toy ny iray amin'ireo mahery fo ireo dia mitsambikina haingana toy ny biby fiompy rehefa mihazakazaka izy.
Sa izay Spiderman mandray gitara elektrika eny an-tànana hamorona vondrona miaraka amin'ireo mahery fo an'ny Guardians of Space. Sary andiana sary izay niasa mihoatra ny tsara ary mampiseho amintsika ny maha-izy azy tany am-boalohany ny mahita an'i Goku manisy tombokavatatra lefona kely amin'ny Coca Cola; eny, aza adino ity dokam-barotra amin'ny marika fisotroana kaloria avo ity.
Saika afaka milaza isika fa ity Japoney mpaka sary ity tsy mamela saribakoly tsy misy loha Ary filokana manavao ny fandaniana fotoana mahafinaritra amin'ny fandinihana ny antsipirian'ny sary marobe izay manarona ny mombamomba anao ao amin'ny Instagram.
Manana ny kaontiny Instagram ianao avy amin'ity rohy ity hahafahanao manaraka ny lahatsoratr'izy ireo ary koa malahelo ny tantaran'ny Instagram izay ahitanao ampahany amin'ny asanao sy ny fomba fanaovanao izany. Filokana mahaliana avy amin'ity mpanakanto ity ary tsy manana karazana tarehimarika voangona rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ahoana no fomba hahamety ny endrik'ireo mpanangona ireo amin'ny alàlan'ny hot.kenobi
Ny sary famantarana vaovao amin'ny Lalao Olaimpika 2024 ao Paris eo afovoan'ny esoeso
Ity matoatoa nalaina sary avy amin'ny iPad ity, dia lasa adala tao amin'ny Twitter